Sheeko Xikmad Leh .. Duuliye Khamri Cabsan Diyaarad U Wado Ma Raaci-lahayd Mise ....
Bil Mataal .. Waxaa addiga iyo qoyskaaga aad ka baxeysaan garoonka diyaaradaha Muqdisho, waxaad ku socotaan Ameerika. Waa marki ugu horeeysay ee lagu safaraayo diyaarad Soomaali leedahay.
Saacaddi ugu dambeeysay ee ay diyaaraddu kici lahayd, waxaa albaabka diyaarada laga soo geliyay Nin garbaha la hayo, lugaha aan dhulka saari u kareynin oo jiidaya.
Ninka waxaa loo dhaafiyay dhanka qeybta laga hago diyaaradda (cockpit). Waa la yaab, sabbabtoo ah waa Nin ku labisan dharka wadaha diyaaradda oo isaga oo garbaha la hayo lagu fariisiyay (Isteerinka) diyaaradda.
Kadib Gabar kamid ah adeegayaasha diyaaradda oo rakaabka dhex mareysay ayaa Nin wuxuu weydiiyey ”muxuu ahaa Ninka qolka laga wado diyaaradda la geliyay”
Gabadhi waxay ku tiri’ waxba ha walwalin waa wadaha koowaad ee diyaaradda, mar-walba isagoo Cabsan ayuu ka xeeyaa Diyaarada, waa nin xariif ah, plaease suunka si wanaagsan u xirro !
Nin garabka fadhiyay oo maqlayay jawaabta gabadha ayaa ku yiri Ninkii ina-adeer " waxba ha ka baqin ninkanni waa tolkeena waliba waa jufadeena, Konton sanno ayuuna wade ka ahaa diyaaradda, ee fulaynimada iska dhaaf !
Su'aashu waxay tahay: Bal maxaad yeeli lahayd, waxaad haystaa shan daqiiqo ka dibna diyaaraddu wey ka ceysaa?
Balse intaadan ka jawaabin isweydii diyaaradaas maku safri lahayd, ka faker oo waxaa safarka kugu wehliya caruurtaada oo dhan iyo xaaskaaga ? waliba ku darso diyaaradda waxay hawada ku jiri-doontaa wax kabadan 10 saacadood intaasna ilaah ka sokow waxaad magan u tahay wadihii khamriga cabsanaa!
Jawaabteyda hadaan u soo noqdo- anniga haddaan ahay qofka diyaaradda ku safraya inta aan suunka iska furo ayaan kala dagi lahaa qoyskeeyga, dadka rakaabka ahna cod sare anoo qeylinaya ayaan ugu sheegi lahaa in naftoodu ay halis ku jirto hadii ay ku safraan diyaaradda uu hagayo ninka cabsan.
Waxay ila tahay , Qof-na ma yeeleen in diyaaradda uu raacayo uu ka xeeyo wade cabsan ama aan xirfada duulinta aqoon oo lagu yiraahdo waa tolkaaga ee raac diyaaradda. waa hubaal in naftaada iyo tan qoyskaaga aadan ku aammineynteen diyaarad uu ninkaasi duuliye ka yahay.
Haddaba Isweydii maxaan ku xulanay hoggaamiyaasha iyo siyaasiyiinta dalkeena Soomaaliya muddo dhan 54 sanno oo aan xor nahay ?
Ma waxaad i leedahay, waxaan ku xulanay cid kale oo ka muddan oo na hoggaamiso ayaan weynay.
Maya, ma waxaad I leedahay waxaan ku doortay xildhibaan-keeyga inuu qabiilkeyga yahay oo kaliya ee wax kale kuma xulan.
Maya, Ma waxaad idhihi lahayd, annigu cidna ma dooran waxaan ku doortana ci’di iima sheegin.
Maya waxaas oo dhan ma’ahan ee ma waxaad ileedahay waxaan ahayn umad qaflad ku jirta oo 54 sanno ku safreysay diyaarad uu wade ka yahay ninka isaga ah isla markaana ay kalkaaliyaal u yihiin qeyra masuuliyiintii isteerinka diyaaradda ku fariisiyay.
Haddaba maxay kula tahay in nolosheena aan ka xoreyno fakerka Qabyaaladda iyo nin jecleysiga ku dhisan ee aan u guurno faker xor ah oo ku dhisan qiimeynta shaqsiga iyo waxa uu qaban karo.